Herinandro iray fanandramana ny iOS 9 Beta 1 | Vaovao IPhone
Tamin'ny alatsinainy dia natombok'i Apple ny Beta voalohany an'ny iOS 9 taorian'ny nanambaràny ny vaovao fa hiampy ity kinova vaovao ity izay ho tonga amin'ny fararano manaraka. Masinina fikarohana vaovao, safidy vaovao ho an'ny Siri, fitantanana bateria tsaratsara kokoa ary fomba fanjifana ambany izay mampanantena adiny 3 an-davaky ny fiainana bateria, fampiharana vaovao, asa bebe kokoa ho an'ny fampiharana Notes, fitendry vaovao miaraka amin'ny asan'ny Trackpad ... Ho fanampin'izay ho an'ireo voatanisa fanatsarana sy fanatsarana ny fitoniana. Aorian'ny herinandro fampiasako azy dia holazaiko aminao ny zavatra niainako amin'ireo fiasa vaovao ireo.
1 Amponga, sangria tena izy
2 Ilay Finder sy Siri vaovao, ilaina fa ho avy tsy ho ela
3 Nandresy ahy indray ny naoty
4 Sarintany, fanatsarana fa vitsy
5 Kitendry vaovao misy asan'ny Trackpad
6 Fahamarinana sy fahombiazana
7 Fehiny: mbola lavitra ny lalana
Amponga, sangria tena izy
Io no fanontaniana mipetraka matetika indrindra amin'ireo tranga ireo. Mazava ho azy fa beta voalohany ity, izay mahatonga ny fanombanana ny fiainana bateria tsy misy ilana azy raha ny fahafantarana ny fomba hitondrany azy amin'ny kinova farany. Apple dia mbola betsaka ny zavatra tokony hiasa., toy ny mpamorona fampiharana ihany. Raha ny marina dia hiteny aho fa ny iPhone no mampidina ny bateria amin'ireo rindrambaiko fa tsy ny rafitra.
Vao avy nametraka ny iOS 9 tamin'ny fitaovako aho dia nametraka rindranasa vitsivitsy, izay ampiasaiko betsaka indrindra, ary nandritra ny roa andro dia tsy hitako izay mahasamihafa azy raha ampitahaina amin'ny iOS 8.3, ilay kinova izay nentiko tamin'ny iPhone 6 Plus mandritra ny herinandro maro. Na izany aza, rehefa avy nametraka ny ambin'ireo fisoratana anarana aho dia nahatsikaritra fa ny fizakantenan'ny fitaovako dia nahena hatramin'ny antsasany. Hatramin'ny iPhone 5 dia tsy voatery namerina namerina ny iPhone aho tamin'ny mitataovovonana vao nahavita hatramin'ny faran'ny andro, ary ataoko izao. Indraindray koa Entiko ao am-paosiko ilay izy ary tena mafana be ilay izy, tsy nampiasaiko nandritra ny fotoana kelikely. Angamba ny fanavaozana ao ambadika na hoe iza no mahalala izay mety hiteraka olana amin'ity lafiny ity izay mila hatsaraina betsaka.
Ilay Finder sy Siri vaovao, ilaina fa ho avy tsy ho ela
Mampanantena ny motera fikarohana vaovao fa ho iray amin'ireo zava-baovao farany tsara amin'ny iOS 9, farafaharatsiny, araka ny nasehon'i Apple antsika tamin'ny Keynote-ny. Satria amin'izao fotoana izao, afa-tsy ireo fifandraisana matetika sy ireo rindranasa fampiasa indrindra dia tsy azonao ampiasaina izany. Any Espana, farafaharatsiny dia toy izany. Tsy afaka mitady amin'ny fiteny voajanahary koa ianaoRaha ho avy ny toetr'andro, tsy manana vaovao ianao (ary mila fotoana ihany koa ny hahatongavanao), ary mazava ho azy fa afaka mampiasa rohy lalina ianao satria tsy nanavao ny fampiharana azy ireo ny mpandraharaha.
Ny telo ampahefatr'io dia mitranga amin'ny Siri, izay nohavaozina hatramin'ny hatsarany ka hatramin'ny estetika, saingy afaka manao zavatra mitovy amin'ny nataony taloha izy, nefa mbola tsy nanolotra ireo asa nampianarina antsika tamin'ny hetsika Apple.
Nandresy ahy indray ny naoty
Iray amin'ireo fiasa vaovao vitsivitsy izay azontsika atao izao ny mankafy ny fampiharana Notes nohavaozina. Hadino aho taloha fa amin'ireo fiasa vaovao ireo dia nahazo ahy indray. Afaka mampiditra rohy avy amin'ny Safari, toro-lalana avy amin'ny Sarintany, ny mety fanaovana sary an-tsary, lisitra mandeha ho azy ... tsy ilay kahie mahazatra intsony izay ahafahanao manoratra fotsiny, fa mpandefitra teny iray manontolo ahafahanao mamorona naoty sy ny kisary mendrika zaraina.
Sarintany, fanatsarana fa vitsy
Ny fampiharana Maps dia hivoatra be ao amin'ny iOS 9 noho ny fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka, zavatra iray izay tena tsy dia tadiaviko loatra, saingy any amin'ny tanàna sasany any Etazonia sy Sina ihany. Matahotra mafy aho fa hiadana be ny fampidirana ny fitateram-bahoaka, ary haharitra ela ny fampidirana tanàna Espaniola, ary mazava ho azy fa miresaka momba an'i Madrid na i Barcelona aho. Raha mila miandry ny hahatongavan'ity fampahalalana ity any Granada aho dia aleo ataoko milamina satria hiandry ela be.
Eny mahasoa izany ny karoka vaovao isaky ny sokajy izay manome toro-hevitra mivantana anao ny Maps mifototra amin'ny toerana misy anao nefa tsy mila manoratra na inona na inona. Fomba haingana sy mora hitadiavana trano fisakafoanana, zaridaina na vonjy taitra akaiky indrindra.
Kitendry vaovao misy asan'ny Trackpad
Fomba iray tena ilaina koa ny fahaizana ampiasao toy ny trackpad ny keyboard. Miaraka amin'ny rantsan-tànana roa dia misosa eo amin'ny fitendry ianao ary azonao atao ny manetsika ilay kursor, na mifantina lahatsoratra aza. Haingam-pandeha lavitra noho ny fomba mahazatra, ary mainka ny iPad noho ny amin'ny iPhone. Tsy afaka nanandrana ny iOS 9 tamina iPad aho, noho izany tsy afaka miresaka momba ny boaty fananganana kitendry vaovao aho, saingy mazava ho azy fa tokony hahasoa azy ireo ho an'ireo izay manova lahatsoratra amin'ny takelaka Apple.
Fahamarinana sy fahombiazana
Raha ny momba ny hafainganana dia hitako fotsiny fa rehefa manandrana hanaitra ny iPhone amin'ny torimaso aho dia mitaky fanindriana maromaro ao an-trano na bokotra herinaratra izany hamaly izany indraindray. Tsy tsikaritro ny fihenan-tsasatra hafa, noho izany ny fahombiazan'ny iPhone 6 Plus dia tsara, toy ny iOS 8. Misy lesoka azo antoka, miaraka amin'ny fanakatonana ny fampiharana (indrindra ny fanakatonana Telegram manelingelina, iray izay manome olana bebe kokoa), ary na ny "paoma" sasany aza tsy fantatra ny antony. Tsy milamina mihitsy io na manana olana mifanentana amin'ny iOS 7 amin'ny betas voalohany, fa aza adino fa beta io.
Fehiny: mbola lavitra ny lalana
Ny iOS 9 Beta 1 dia lavitra ny zavatra nasehon'i Apple antsika tamin'ny lahateny fototra. Fitaovana maro no mbola tsy misy, ny bateria dia tsy vitan'ny hoe tsy mahafeno ny ora efa nampanantenaina fa kely kokoa (kely kokoa), ary manana ny olana amin'ny fitoniana izay beta ihany no avela. Raha fintinina, raha tsy hoe "mikorontana" ianao, Tsy manoro hevitra anao aho hametraka azy, ary mainka ny amin'ny iPhone na iPad ampiasainao isan'andro. Tsara kokoa ny miandry fanavaozam-baovao izay manampy fiasa sy manatsara ny olan'ny bateria.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Herinandro iray fanandramana ny iOS 9 Beta 1
Luis Cases dia hoy izy:
Efa miseho ao amin'ny Maps ny fifamoivoizana any Barcelona.
Valiny tamin'i Luis Cases
Salama, misaotra anao tamin'ny fampahalalana, maka toerana kely kokoa ve ny iOS 9 vao napetraka?
tadidio fa beta io ary izy no beta voalohany, lavitra ny dikan-teny farany. Tsy maintsy tadidinao foana fa satria misy olona tsy mahalala ny dikan'izany.
MIBSeven7 dia hoy izy:
Ny Beta an'ny Ios 9 no tsara indrindra nanandrana ahy, manana bibikely kely hafa izy io, fa ho an'ny iPhone 4s an'ny 8gb dia lafo vidy izany, efa manana toerana ho an'ny zavatra rehetra aho! ary mbola manana gig 2 aho. Ilay bateria tsy haiko hoe inona no lazain'ireto adala ireto raha maharitra ela kokoa noho ny mahazatra aza izy io, mandeha haingana be izy io ary tsara tarehy kokoa ny zava-drehetra na dia mpinamana be aza isika hehe, manoro hevitra aho ny hametraka azy io ary rehefa mamoaka beta 2 dia mitovy ihany ny manamboatra bibikely sasany, fa mandeha tsara be io, aza matahotra fa tsy fantatr'ireo olona ireo akory izay lazainy.
Valiny amin'ny MIBSeven7
Raha ny fahitako azy, amin'ny fitaovana taloha (tompon'ny iPad 2) dia nihatsara be ny toerana misy sy ny hafainganana, saingy amin'ny fitaovana vaovao (manana iPhone 6 aho) miova ny fiasa, asa bebe kokoa no ampiharina ary miteraka tsy filaminana bebe kokoa amin'ny rafitra. Ho fanampin'ny fanjifana be loatra ny batery dia heveriko fa ny zavatra tadiavin'izy ireo amin'ny iphone 4s sy ipad 2 dia ny fitoniana, ny hafainganana ary ny fiainana bateria izay azo antoka fa ho tratra ary amin'ireo maoderina maoderina dia efa misy ny fiasa vaovao rehetra notadiavina, ka ho ela kokoa izy ireo amin'ny famolahana ny zava-drehetra
Viking dia hoy izy:
Rehefa dinihina fa amin'ny volana Jolay izy ireo dia handefa ny beta beta ho an'ny daholobe iOS 9, mieritreritra ve ianao fa anio na rahampitso dia hanangana beta developer hafa izy ireo? na amin'ny herinandro ambony
WallRotator manova ny mombamomba anao isaky ny mamoha